Forex News | Fanavaozana ara-bola avy amin'ny tsenam-bola amin'ny FXCC
Company News & Fampandrenesana ara-barotra
FXCC dia faly mitantara ny fitohizan'ny fanentanana Promotional
Noho ny fahalianana lehibe amin'ny fampielezan-kevitra fanentanana, FXCC dia faly mitatitra amin'ireo mpanjifantsika sy mpiara-miasa fa hanohy ny tolotra Bonus mandritra ny volana Oktobra.
Ny fampiroboroboana bonus dia mikendry ny hanomezana valisoa ny mpanjifantsika vaovao sy ny mpanjifa mahatoky amin'ny fampifangaroana ny bonus 100% Start-Up miaraka amin'ny 50% Bonus funding ho an'ny tahiry tsirairay natao tamin'ny volana! Ary tsy izay ihany - fa ny varotra tsirairay dia nahatonga ny mpanjifantsika hahazo tombony, izay ahafahantsika mamaly soa ny mpivarotra tsy mivadika amin'ny tena vola, miala vola.
Vonona hampiasa ny tombontsoa amin'ity fampiroboroboana ity ve ianao? kitiho eto Hanomboka raha mbola tsy manana kaonty ianao.
Mpampiasa efa manana kaonty amin'ny FXCC ary maniry ny miditra amin'ny fampiroboroboana dia raiso ny fotoana rehetra hitakiana ilay bonus!
* Azafady azafady ny fepetra sy fepetra momba ny antsipirian'ny fampiroboroboana Bonus.
FXCC dia manangana tranonkala vaovao hiarahaba ireo mpanjifany ao amin'ny EU
Amin'ny maha-ampahan'ny fiara tsy tapaka antsika mba hanitatra ny fahafahantsika iraisam-pirenena ary hanitarana ny serivisy ho an'ny mpihaino manerana izao tontolo izao, dia nanokatra tranonkala vaovao vaovao izay hanolotra ireo mpanjifa tsy mpikambana ao amin'ny EU, na ireo mpanjifa Eoropeana tsy hivarotra avy amin'ny Vondrona Eoropeana ny FXCC. manolotra mora kokoa ny vokatra sy ny serivisy, raha mitazona ny tontolo ara-barotra azo antoka ho an'ny mpanjifantsika.
Raha jerena ny fitomboan'ny isan'ny mpivarotra miditra amin'ny tsena fifanakalozam-bola, dia nirotsaka an-tsitrapo isika mba hanomezana fahafaham-barotra ara-barotra, hanolotra fitaovana varotra varotra sy vokatra samihafa, ary manantitrantitra ny mangarahara sy ny fahamarinan-toetra amin'ny fotoana rehetra.
Ny iray amin'ireo orinasa tsara indrindra sy mendri-pitokisana ao amin'ny indostria, ny tanjontsika dia ny hanamaivana ny mpanjifantsika miditra amin'ny tsena fitadiavam-bola mandritra ny fifanakalozana ara-barotra.
Ny China Union dia manomboka manomboka amin'ny mpivarotra mpikirakira shinoa
Vao haingana dia nampidirina safidy fanampiny sy fisoratana vola amin'ny alàlan'ny fifandraisanay amin'i China Union Pay. Amin'ny fananganana ity fifandraisana vaovao ity dia manokatra varavarana iray izahay, mamela ireo mpivarotra vaovao vaovao sy efa za-draharaha avy any amin'ny firenena Aziatika toa an'i Shina, mba hivarotra mivantana amin'ny alalan'ny modely momba ny varotra ECX FX an'ny FXCC.
Niorina tamin'ny 2002 ny China UnionPay, efa nihoatra ny folo taona ny orinasa. Ny China Union Mandoa ny laharana fahatelo amin'ny mpandraharaha mpanome tolotra, amin'ny fahombiazan'ny tolotra fanao isan-taona aloa, ao ambadiky ny MasterCard sy ny Visa. Noho ny fanohanany avy amin'ny governemanta shinoa CUP dia lasa mpandraharaha mpanome tolotra ho an'ny banky maintimoa efatra lehibe indrindra.
Araka ny fantatry ny besinimaro ary matetika no antsoina hoe "Union Pay" na "CUP", ny mpikarakara ny serivisy dia namoaka karatra dimy tapitrisa manerantany. Ny China Union Pay dia efa fomba fiasa azo ekena ao amin'ny firenena 150 ankehitriny ary satria ireo mpiasan'ny banky 2009 Union Pay dia afaka niditra tao amin'ny milina Link ao Angletera ary mampiasa ny karatra misy azy ireo mba hisintonana mora foana an'i Eoropa.
Ny Fiantsenan'i Shina dia mandroso haingana ny fomba fandoavam-bola amin'ny ankapobeny ho an'ny mponina Shinoa amin'ny fidirana tsena iraisam-pifanarahana iraisam-pirenena. Ny Sina Union Pay dia nanjary ivon-toerana sy ampahany lehibe amin'ny orinasa bankcard ao Shina. Nandray anjara lehibe tamin'ny fampiroboroboana ny indostrian'ny karatra ao Shina ihany koa izy ireo.
Ao amin'ny FXCC dia miezaka foana isika hanolotra fanatsarana ny lafiny rehetra amin'ny orinasam-pifantohana mifantoka. Noho izany dia manara-maso mandrakariva ny indostrian'ny vola isika amin'ny fomba fitadiavam-bola vaovao, mba ahafahan'ireo mpanjifantsika mametraka mora foana ny kaonty, na manokatra kaonty vaovao, mba hanakalozana FX amin'ny alàlan'ny sehatra MetaTrader.